‘कृषिमा युवा कार्यक्रम’ लागू हुँदै, अनुदान लिन के गर्ने ? | दर्पण दैनिक
‘कृषिमा युवा कार्यक्रम’ लागू हुँदै, अनुदान लिन के गर्ने ?
प्रकाशित मिति: २०७६ कार्तिक २१ गते ०५:५१
काठमाडौं । सरकारले चालू आर्थिक बर्ष २०७६÷०७७ देखि नै लागू हुने गरी २८ जिल्लामा ‘कृषिमा युवा कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने भएको छ । युवाहरुलाई कृषिमा आकर्षित गर्दै स्वरोजगार बनाउन सरकारले ‘कृषिमा युवा कार्यक्रम सञ्चालन प्रक्रिया २०७६’ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको हो । कार्यक्रम अन्र्तगत कृषि उद्यम तथा कृषि कर्म गर्न चाहने युवाहरुले कुल लागतको ५० प्रतिशत रकम सरकारले दिनेछ । कृषि तथा पशुपालनका क्षेत्रमा उद्यम गर्ने युवाहरुलाई सरकारले अनुदान दिनेछ । १८ बर्षदेखि ४५ बर्ष उमेर समुहका युवाले यो कार्यक्रम सहभागी हुन सक्नेछन् ।
आफ्नै स्वामित्वको जग्गा वा कम्तीमा ५ बर्षका लागि लिज सम्झौता भएर उद्यम गर्ने युवाले सरकारी अनुदान पाउने छन् । ‘कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन अनुदान कार्यविधि’ का आधारमा युवा कृषकलाइ अधिकतम २० लाख रुपैयाँसम्म अनुदान दिइने कृषि विकास मन्त्रालयका सचिव डा युवकध्वज जीसीले बताए ।
मन्त्रालयले अनुदान कार्यविधि स्वीकृतीका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ । पहिलो चरणमा विभिन्न २८ जिल्लाबाट सुरु हुनेछ । खासगरी सुनसरी, झापा, भोजपुर, ताप्लेजुङ, रौतहट, सर्लाही, बारा, धादिङ, सिन्धुपाल्चोक, चितवन, काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, बागलुङ, पर्वत, गोरखा, नवलपरासी सुस्तासम्म, गुल्मी, अर्घाखाँची, रोल्पा, प्युटान, कपिलवस्तु, रुकुम सल्यान,रुकुम पूर्व, रुकुम पश्चिम, कन्चनपुर, कैलाली जिल्लामा कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ ।
कृषि विभाग र पशुसेवा विभाग अन्र्तगत कार्यान्वयन हुनेछ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्र्तगतका सम्वन्धित जिल्लामा परियोजना कार्यान्वयन इकाइ तथा कृषि ज्ञान केन्द्रमार्फत कार्यक्रम सञ्चालन हुने जनाइएको छ । कार्यक्रम अन्र्तगत खासगरी पूँजीगत खर्च मेशिनरी, औजार, बीउ, उन्नत नश्लका राँगा, साँढे, बोकामा अनुदान दिइने छ । तर, ढुवानीका साधनहरुका खरिदका लागि अनुदान नदिइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अबदेखि दोहोरो कृषि अनुदान लिन नपाईने
२०७७ जेष्ठ १५ गते ०५:२६
काठमाडौँ । आउँदो आर्थिक वर्षदेखि कसैले दोहोरो कृषि अनुदान लिन नपाउने भएको छ । अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै कृषिमा सबै अनुदान पुनरावलोकन गरी दोहोरो नपर्ने व्यवस्था मिलाउने बताएका छन् ।
बहुगुणी जडिबुटी चिराईतो (𝑺𝒘𝒆𝒓𝒕𝒊𝒂 𝒄𝒉𝒊𝒓𝒂𝒚𝒊𝒕𝒂)
२०७७ जेष्ठ १५ गते ०३:४३
जडिबुटी चिराईताे (𝑺𝒘𝒆𝒓𝒕𝒊𝒂 𝒄𝒉𝒊𝒓𝒂𝒚𝒊𝒕𝒂) नेपालको महत्वपूर्ण जडिबूटिहरु मध्ये एक हो । यसबाट धेरै रोगहरुको उपचारका लागि आयुर्वेदिक तथा आधुनिक औषधीहरु बनाइन्छ । यो जडिबूटी प्राकृतिक अबस्थामा विशेष गरी उच्च पहाडी भागमा (१७०० देखि २७००) मि. बिच पूर्वाञ्चल मध्यमाञ्चल क्षेत्रमा बढी फैलिएको पाइन्छ । झट्ट हेर्दा बनमारा जस्तो लाग्ने चिराइतोलाई स्थानिय बासिन्दाले तीते पनि भन्दछन् । खास चिराइतोमा चिराटिन तत्वको मात्रा बढी हुने भएकोले स्वादमा निकै तितो हुन्छ । यसलाई पूर्वमा डाँख्ले वा पोथी चिराइतो पनि भन्दछन् भने मध्यमाञ्चलमा एक नम्बरको वा काली चिराइतो भन्ने गरिन्छ । अरु प्रजाति सँग सामूहिक नाम भने चिरेटो तथा चिरैता नै हो । अग्रेजीमा पनि यसलाई चिरेटा (Chireta)नाम राखिएको छ ।